Bar adigoo tixgelinaya xaddidnaanta garashada ee ardayda.
Wax u baro hab kor u qaadaya xajinta xusuusta muddada-dheer.
Aqoonso go'aamiyaasha dhaqanka qaska.
Deji istaraatijiyad lagu maareeyo dhaqanka ardayga.
Aqoonso dhaqamada saameeya dhiirigelinta ardayga.
Kor u qaad dhiirigelinta gudaha, is-xakamaynta waxbarashada, iyo horumarinta xeeladaha garashada badan ee ardaydaada.
Moockan waxa uu hiigsanayaa in uu dhamaystiro tababarka cilmi nafsiga ee macalimiinta. Waxay dabooshaa 3 mawduuc oo aad u gaar ah, kuwaas oo labadaba si aad ah loo fahmay iyada oo ay ugu wacan tahay cilmi-baaris cilmi-nafsiga oo tobanaan sano ah, oo gabi ahaanba muhiim u ah macalimiinta:
3-daan maado waxaa lagu doortay muhimadooda gudaha, iyo xiisahooda isdhaafsiga ah: waxay muhiim u yihiin dhammaan maaddooyinka, iyo dhammaan heerarka dugsiyeedka, laga bilaabo barbaarinta ilaa waxbarashada sare. Waxay khuseeyaan 100% macalimiinta.
Cilmi-nafsiga ee macallimiinta Diisambar 19, 2021Tranquillus
READ Waxyaabaha muhiimka u ah Kalandarka Google / Gmail / Xiriirada
horeKu taageer ardaydaada hanuuninta iyadoo ay ugu wacan tahay MOOCs
socdaAasaaska Xogta Weyn